आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, कती छ तोलामा ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १० मंसिर मंगलवार १२:५९
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, कती छ तोलामा ?
आज हप्ताको तेश्रो दिन मंगलबार सुनको भाउ ह्वात्तै घटेको छ। आज सुन ४ सयले घट्न गई प्रतितोला ७१ हजार २ सयमा कारोबार भईरहेको छ। हिजो भने सुन प्रतितोला ७१ हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै, सुन सँगै चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। ५ रुपैयाँले चाँदीको भाउ घटेर प्रतितोला ८ सय ५०मा कारोबार भईरहेको छ।
आज ह्वातै घट्यो प्याजको भाउ, कती पुग्यो ? हेर्नुहोस्
यस्तो छ आजको सुनको भाउ, हेर्नुहोस्!
काठमाडौँमा नियम विपरीत शहरलाई कुरूप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाइने
आज सुनको भाउ घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नुहोस् !
PREVIOUS Previous post: प्रम ओली अस्पतालमा – एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरिदै
NEXT Next post: कृषि विकास बैंकका कर्मचारीले गरे करोडौँ रकम दुरुपयोग